Malunga nathi -Riqi (Hangzhou) Technology Co., Ltd.
I-Riqi (Hangzhou) yeTekhnoloji yeNkampani, Ltd.
Itekhnoloji co ye-Riqi (hangzhou). Ltd. Ukusukela ngo-2010, besizinikele ekwandiseni utyalomali ekwenziweni, kumasifundisane,
kunye nezixhobo, ukwazisa kubuchwephesha obuphambili nakwinzululwazi evela kwilizwe langaphandle.
Riqi Icebo lokucoca ulwelo, limele izisombululo zokucoca ngempumelelo kunye nobuchule benkonzo kumzi mveliso wokucoca. Sifumana impumelelo kulo lonke ulawulo lokungcolisa uthuli kunye neeprojekthi zokucoca indawo yamandla oMbane weBoiler, iBlast-Furnace kwizityalo zentsimbi, indawo yokuxuba i-Asphalt kunye nee-kilament zesamente, amashishini amachiza, njl.
Sizinikezela ekunikezeleni ezona zisombululo zohluzo, zoqoqosho kunye nezisombululo, ulawulo lokungcola ukusukela <15mg / m3, , ukusombulula ngokupheleleyo umgangatho olawulayo we-PM2.5, iifilitha zothuli zokusebenza kuya kuba ngama-20% ngaphezulu kunabanye.
Inkampani yethu inamandla okwenza amandla, kunye nemveliso iyonke yonyaka yokuhluza izinto, uthuli luqokelela ibhegi, inaliti yaziva kunye nelaphu lokucoca elingasuki.
Inkampani yethu yanikwa isatifikethi se I-ISO9001Ukufikelela kwinqanaba eliphambili nakwamanye amazwe kumgangatho, ukufumana ukuzithemba kwabathengi ekhaya nakumazwe aphesheya.
Iimveliso ziye zithunyelwa eMzantsi-mpuma Asia, Middle Asia, eYurophu, Australia, America njl, ngaphezulu 40 amazwe.
Ukuzibophelela kwethu kukuphucula nokwandisa ukusebenza kweefilitha zothuli zolawulo lokungcoliseka komoya.
Sizama rhoqo ukuphucula iimveliso zethu kunye neenkonzo zethu ukuze kuzuze abathengi bethu-ukubonelela ngobomi obude bokusebenza kweefilitha zothuli nako konke malunga nokunciphisa ukukhutshwa.
Ukuhlangana nokulindelwa kwabathengi bekusoloko kugxile kulawulo lwethu lomgangatho .Ukuqhubela phambili kwemveliso rhoqo kumisela imigangatho yezisombululo ezitsha kwitekhnoloji yokuhluza.
Izinto zokucoca ubushushu obuphezulu:
Inaliti ye-Aramid yaziva, inaliti ye-FMS yaziva, inaliti ye-fiberglass yaziva, inaliti yefilimu ye-PTFE, izixhobo zokucoca ifilimu, inaliti ye-P84 yaziva, inaliti ye-PPS yaziva, izinto zokucoca ezingalukwanga.
Zisetyenziswa ngokubanzi ekusetyenzisweni kokususwa kothuli kubushushu obuphezulu kumashishini esinyithi kunye nokunyibilikisa, ukutshisa inkunkuma, ukuveliswa kwamandla omphunga, izixhobo zokumelana nobushushu, ukuphazamiseka kwebhitum, amalahle, isamente, i-coke, i-oyile evuthayo, njl njl.
Izinto zokucoca ubushushu obuqhelekileyo:
Ipholiyesta, inaliti ye-polypropylene yaziva, inaliti ye-anti-static polyester yaziva.
oyile kunye namanzi ukumelana inaliti ipholiyesta waziva, ipholiyesta-ndizayo ukuhluza izinto kunye nezinto zokucoca ephothiweyo, ezilungele ukuhluza kweentlobo ngeentlobo zegesi yeqondo lobushushu eliqhelekileyo.
Ilaphu lokucoca ulusu, ilaphu lokucoca ulwelo, ipolypropylene inaliti evakalayo, inaliti entsonkothileyo, esetyenziswa kwizixhobo zokulahla ilindle ezinje ngeplate-kunye-nesakhelo sokucoca ulwelo kunye nohlobo lwebhanti lokucoca ulwelo.
Ukuthembela kumandla ayo atyebileyo, izixhobo eziphambili, iimveliso ezikumgangatho ophezulu kunye nenkonzo epheleleyo, esele ifumene abathengi basekhaya nakwamanye amazwe.
Sisoloko sibeka umgangatho kunye nekhredithi kwindawo ephambili.